बाढीले बल्खुको तरकारी बजारमा भागाभाग, कम्तीमा २ करोडको क्षति (फोटो फिचर) – Butwal 24 News
September 6, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on बाढीले बल्खुको तरकारी बजारमा भागाभाग, कम्तीमा २ करोडको क्षति (फोटो फिचर)
काठमाडौँ– कोही साबेलले हिलो माटो उठाएर फालिरहेका थिए । को‘मुला, गाँजर, काँक्रो, बन्दा, काउली, भेन्टा थुप्रै तरकारी राखेको थिएँ,’ उनले छरपस्ट बजार देखाउँदै भने, ‘हेर्नुस् त ! केही छैन अहिले ।’
अर्का व्यवसायी राजकुमार राईले आजै बेच्न ठिक पारेको ८० हजार रुपैयाँको तरकारी बगाएको बताए । उनले डल्ले चाउ, पाते चाउ लगायत अनेक किसिमका तरकारी राखेका थिए । बागमतीको ढलको लेदो तरकारी बजारमा पस्दा बजारमा भेला भएका व्यापारीहरू तर्सिएर भाग्न थाले । ‘बाहिर हेर्दा हेर्दै घुँडासम्म पानी आइसकेछ,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘तरकारी छोडेर भाग्नुको विकल्प नै थिएन ।’
राजकुमारका अनुसार तरकारी बजारमा पानी पस्न थाल्दा बिहानको सवा चार बजेको थियो । पाँच बज्दा बजार पूरै जलमग्न भइसकेको थियो । पानी घट्न थालेपछि उनीहरू बजार पसे ।ही ठेलामा डोरी लगाएर मिलीजुली माटो र बालुवाको लेदो उठाउँदै फाल्नमा व्यस्त थिए ।
यस्तो दृश्य हो सोमबार बिहान बल्खुस्थित फलफूल तथा तरकारी बजारको । बल्खुको तरकारी बजारमा पूर्वाह्न दुई बजे नै चहलपहल शुरू हुन्छ ।
सोमबार बिहान व्यवसायीहरू तरकारी मिलाइरहेका थिए । अचानक बाग्मती उर्लिएर तरकारी बजार भरिएपछि भागाभाग भयो । ज्यान बचाउन भाग्नु परेपछि उनीहरूलाई आफ्ना सामानको चिन्ता भयो ।
‘१० मिनेटमै पानीले तरकारी सखाप पार्यो नि !’ ५८ वर्षिया अमृतबहादुर बस्नेतले भने, ‘मेरो कम्तीमा ५० हजारको तरकारी बगायो ।’
उनको व्यवसाय भनेकै तरकारी व्यापार हो । यही व्यवसायले १० वर्षदेखि परिवार पाल्दै आइरहेका छन् । बजारमा पानी पसेर सबै तरकारी बगाएको चाहिँ उनले पहिलो पटक देखेका हुन् ।
मुला, गाँजर, काँक्रो, बन्दा, काउली, भेन्टा थुप्रै तरकारी राखेको थिएँ,’ उनले छरपस्ट बजार देखाउँदै भने, ‘हेर्नुस् त ! केही छैन अहिले ।’
राजकुमारका अनुसार तरकारी बजारमा पानी पस्न थाल्दा बिहानको सवा चार बजेको थियो । पाँच बज्दा बजार पूरै जलमग्न भइसकेको थियो । पानी घट्न थालेपछि उनीहरू बजार पसे ।
‘पाँच वटा खाद्य गोदाम; लसुन, अदुवा र प्याजको २५ वटा गोदाममा पानी पस्यो,’ उनले भने, ‘तरकारी र खाद्य गरी २ करोडभन्दा बढिको क्षति भएको छ ।’
उनका अनुसार तरकारी बोक्ने, फोहोर बोक्ने र व्यवसायीले प्रयोग गर्ने केही मोटरसाइकलहरू हिलोमा पुरिएका थिए ती अहिले बनाउन पठाएका छौँ ।
मौसम ठिक भए सबै सफाइ हुन र तरकारी बजार सञ्चालन हुन दुई दिन लाग्ने बस्नेतले बताए ।
कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्छु : गोविन्द केसी